Torohevitra Ho An’ireo Mpandikateny Vaovao – Fizaràna Faha 3: Fomba Fiteny Sy Media Sosialy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Oktobra 2018 10:55 GMT
(Naotin'ny Tonia – ity lahatsoratra ity no fahatelo ao anatin'ny anfiany misy fizaràna telo: Torohevitra ho an'ireo Mpandikateny Vaovao.)
Ity lahatsoratra farany amin'ireo andianà torohevitra ho an'ireo Mpandikateny Vaovao ity dia mahakasika ny fitenin-jatovo sy ireo idioma, izay, ho ahy, tena endrika sarotra mihitsy, saingy tena mahafinaritra indrindra, natrehako tamin'ny fianarana asa tato amin'ny GV.
Ho an'ireo ao amintsika izay liana amin'ny fomba fifampiresahantsika, ny fitenin-jatovo dia mety hahafaly satria taratry ny fiovaovàna endrika tsy mitsahatra eo amin'ny fiteny izy. Na izany aza, mahatonga ny fianarana ny fiteny ho sarotra izy io satria ny firenena sy ny faritra tsirairay avy dia samy manana ny fomba fiteniny avy, izay tsy mahazatra raha tsy amin'ireo izay monina amin'io faritra io ihany. Ity lahatsary malaza amin'ny YouTube ity manoritsoritra amin'ny fomba mahatsikaiky ireo fahasarotana atrehin'ireo izay mianatra ny teny espaniola satria mety manana dikany samihafa marobe ny teny iray arakaraka ny faritra izay mampiasa azy.
Jade Dussart, avy amin'ny Lingua Teny Frantsay, tao amin'ny fihaonambe Kolombo, Sri Lanka. Avy amin'i Jer Clarke
Nonina tany Shily aho hatramin'ny taona 1996, ary ahitana fomba fiteny marobe ny teny Espaniola tenenina ao. Sahirana ireo mpizahatany avy amin'ireo firenena hafa miteny espanola vao mahafantatra izay lazain'ireo Shiliàna ao anatin'ireo trangan-javatra tsy dia voafaritra mazava tsara loatra. Ny Mapudungan, fitenin'ireo Mapuches, ireo teratany avy ao anivontany atsimon'i Shily, no ampiasain'ny ampahany betsaka amin'ny fitenin-jatovo. Taona maro lasa izay, navoaka ny rakibolana iray an'ny fitenin-jatovo Shiliàna, Ahoana no hiainana ao anaty mikitroka Shiliàna, an'i John Brennan sy Alvaro Taboada. Ho ahy, harena tena sarobidy io ary matetika ataoko filankevitra!
Koa satria betsaka tamin'ny hatanorako no laniako tao Shily, tsy fantatro mihitsy ny fitenin-jatovo nampiasaina tao amin'ireo faritra hafa ao Amerika Latina sy Espaina. Io fahabangana tao anatin'ny fahalalako ny teny espaniola io no mahatonga ny fandikanteny ho an'ny GV ho sarotra kokoa, indrindra fa ireo bitsika.
Naneho hevitra tao anatin'ny “Hangout Latin America Mini Summit 2015″ ny talen'ny Lingua, Mohamed ElGohary, fa tokony hampidirina anatin'izay voalaza ireo idioma eo an-toerana ary nasainy nampiasaina ny Wikipedia mba hahazoana hevitra mikasika izay toejavatra miaraka aminy sy ny fitodiny.
Mba hanatsarako ny fiainako momba ireo fitenin-jatovo ampiasaina ao amin'ireo faritra samihafa ao Amerika latina, manome sosokevitra i Laura mba ho ataoko ho toy ny laharampahamehana ny mamaky blaogy, bitsika ary ireo vohikalam-baovao amin'ny tambajotra avy amin'ireo firenena samihafa. Nanambara ihany koa izy fa izaho dia tokony hitahiry ny angona ahy manokana momba ireo fitenin-jatovo sy ireo idioma isam-paritra ary hatramin'ireo harena amin'ny tambajotra, toa ireo rakibolana misy ny fitenin-jatovo amin'ny fiteny roa.
Ireo loharano voatrandrako hatreto:
Torolàlana iray ho an'ny fitenin-jatovo Arzantina, ¡Qué lo Parió Che! an'i Gerardo Governatori sy Roberto Larocca
Torolàlana iray ho an'ny fitenin-jatovo Shiliaàna How to Survive in the Chilean Jungle an'i John Brennan sy Alvaro Taboada
Boky iray fitrandrahana ireo fiavian'ny idioma Espaniola, Con Dos Huevos an'i Heloise Guerrier sy David Sanchez
Lara Al Malakeh, mpamoaka lahatsoratra MENA sy Arabic Lingua, tao amin'ny fihaonambe Kolombo, Sri Lanka. Avy amin'i Jer Clarke
Ny natiora tena am-bava ananan'ireo media sosialy
Ny fihanaka mafonja an'ireo media sosialy dia niteraka fampivelarana lehibe tao anatin'ny fampiasana ny fiteny. Mivoatra ny fiteny ary miova haingana be izaitsizy miohatra amn'ny tany aloha, izay mahatonga ho zava-dehibe ny faharàhana hatrany an'ireo famoronana teny vaovao ‘néologismes’, ireo fanafohezan-teny vaovao ‘acronymes’, ny fitenin-jatovo ary na dia ny fomba fisainana vaovao aza.
Ho ahy, tena fanamby ny fandikàna hanakaiky ny tena izy an'ireo bitsika rehefa miasa amin'ireo lahatsoratra eo amin'ny GV. Ireo bitsika, tahaka ny ankamaroan'ny media sosialy, dia tena manana endrika am-bava. Namboarina hifanaraka amin'izay mety ho itenenana azy izy ireo, tsy an-tsoratra. Matetika ampiasaina ao anatin'ireo nitsika ny fitenin-jatovo vao haingana eo amin'ilay faritra ary ny dikany dia mifanaraka izay hevitra manodidina ny nipoirany, manery ny mpandika hanana fahalalana ara-tsosialy, politika sy ara-kolontsaina ny voalaza ao amin'ilay bitsika. Mba hamokarana fandikàna manakaiky ny tena izy, mety mila manao fikarohana fanampiny ilay mpandika ary hatramin'ny fifandraisana amin'ny mpanoratra ny lahatsoratra niaingàny.
Ao anaty firesadresahana voalaza ery ambony, naneho hevitra i Laura, hoe “manana ny anjarany amin'ny fifampizaràna traikefa ireo media sosialy, izay tena sarotra adika. Tsy maintsy tena mahafantatra ny hevitra manodidina izay voalaza. Mivoatra ny voambolana, izay no antony maha-zava-dehibe ny fandikàna ny sehatra
mahaliana ny tena […] mba tsy hahavery amin'ireo fiovàna.”